“स्वास फेर्न गाह्रो भएर मास्क माथि सारेको हुँ” : प्रजिअ – Khabar PatrikaNp
“स्वास फेर्न गाह्रो भएर मास्क माथि सारेको हुँ” : प्रजिअ
August 24, 2020 192
बारामा मास्क नलगाउने सर्वसाधारणलाई कारबाही गरिरहेका प्रशासन प्रमुख स्वंयले मास्क नलगाउँदा कारवाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक विश्लेषण सुरु भएको छ ।बाराका सिमावर्ती क्षेत्रहरुमा तस्करी मौलाएको खबर सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो ।अनुगमनका क्रममा खिचिएका तस्बिर सार्वजनिक भएपछि हाल प्रजिअको आलोचना सुरु भएको हो ।
“जनताले मास्क नलगाए जबर्जस्ति १०० रुपैया तिराउने हाम्रो प्रजिअ रुद्र प्रसाद पण्डित ज्यु निधारमा मास्क लगाउदा कति तिर्नुपर्ने उचित होला?”सार्वजनिक भएको तस्बिरमा प्रजिअ पण्डितले निधारमा मास्क लगाएको देखिएको छ । मुख र नाक छोप्ने गरि मास्क लगाउनु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भएपनि प्रजिअले मापदण्डलाई वास्ता गरेका छैनन् ।
निधारमा मास्क लगाएका बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित । अझ, उनले आफैले तर्जुमा गरेको नियमको समेत उल्लंघन गरेका छन् । बारा पर्साका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले हाल प्रजिअको मास्क बिनाको फोटो पोष्ट्याउँदै कारवाहीको माग गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका एक प्रयोगकर्ता लेख्छन् “जनताले मास्क नलगाए जबर्जस्ति १०० रुपैया तिराउने हाम्रो प्रजिअ रुद्र प्रसाद पण्डित ज्यु निधारमा मास्क लगाउदा कति तिर्नुपर्ने उचित होला?”
त्यस्तै अर्का समाजिक संजाल प्रयोगकर्ता बिनय गुप्ता लेख्छन् “२४ घण्टा नैं माक्स लगाउने नियम नहोला कि आवश्कता अनुसार लगाउँदा होलान्। माक्स नलगाउने लाई जरिवाना गरिएकाे हो। फोटोमा माक्स निधारमा छ । उमेर अनुसारले गारो भाको बेला माथि गरिएकाे होला।
स्वास फेर्न गाह्रो भएर माथि सारेको हुँ,
“आज सिम्रौनगढ अनुगमनको क्रममा खैरो मास्क लगाउदा श्वास थुनिएको जस्तो महसुस हुने भएकोले दुरि कायम गरि मास्क माथी सारेको बिषयलाई टिप्पणी आएको रहेछ ! भोलिदेखी मेडिकल मास्क नियमित रुपमा प्रयोग गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु !”
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि वारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रजिअ पण्डित भन्छन् “आज सिम्रौनगढ अनुगमनको क्रममा खैरो मास्क लगाउदा श्वास थुनिएको जस्तो महसुस हुने भएकोले दुरि कायम गरि मास्क माथी सारेको बिषयलाई टिप्पणी आएको रहेछ ! भोलिदेखी मेडिकल मास्क नियमित रुपमा प्रयोग गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु !”
Prevनेपाल आउन थाल्यो कोरोनाभाइरसबाट बचाउने औषधि ‘रेम्डेसिभिर’, नेपाली मूल्य कति ? पुरा पढ्नुहोस
Nextयी ९ राशिको भाग्य राम्रो छ, भदौ ७ देखि १३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
नेपालको अनौठा र अत्यन्तै शक्तिशाली मन्दिर जहाँ जे मागेपनि पूरा हुनेगर्छ,ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस
भित्र भगवान, बाहिरै भए भक्तजन
बाढीले पनि सतायो, बन्दाबन्दीका कारण दाना अभाव हुँदा उचित आहार नपाएर पनि ९०० केजी माछा मरे
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34129)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34043)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33492)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25263)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22636)
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोडलसंग विवाह गर्नै लाग्दा फेरी मिडियामा आइन बालिका, भन्छिन – ‘म संग लिभिङ टुगेदर अनि विवाह चाहि अर्कैसंग’ (भिडियो हेर्नुहोस)
भो आउँदैनौ अब अष्ट्रेलिया तिमीहरुको तेल भिषामा
राजमार्गमा खुकुरी देखाएर यात्रुबाहक बस तोडफोड